- प्रत्यक्ष प्रसारण in 4d : 20h : 31m
“एकमात्र यस्तो चमत्कारिक तत्त्व, जसले मृत्युलाई जीवनमा बदल्छ ।”
माटो जोगाऔँ अभियानको उद्देश्य माटोको चमत्कारलाई जीवन्त राखिरहन सबै मानिसहरूलाई एकजुट गर्नु हो ।
हामीमध्ये धेरैजसो मानिसहरू जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण र पानीको अभाव जस्ता शब्दहरू र अवधारणाहरूसँग परिचित छौँ, तर निकै थोरैले माटोमा ध्यान दिएका छन् । हजाराैँ वर्षदेखि, धरतीको सतहमा रहेको पातलो तहको उर्वर माटोले नै पृथ्वीमा जीवनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
माटो वास्तवमा के हो अनि यसले के गर्छ ?
आउनुहोस्, तलका केही प्रश्न र तिनका उत्तरहरूको माध्यमले हामी यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ ।
प्रश्न 1 / 6
माटो अर्थात् ______
खनिज पदार्थ र चट्टानको धुलो
बालुवा + जैविक पदार्थ
हाम्रो जीवनको आधार नै माटो हो । तर......
कृषि, वन फँडानी, र अन्य कारकहरूले भयानक गतिमा सतही माटोलाई क्षति पुऱ्याउनुको साथै सखाप गरिरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा, ५२% कृषियोग्य जमिन विनाश भइसकेको छ । धरती सङ्कटमा छ । यदि अहिलेकै गतिमा माटोको गुणस्तर घटिरहने हो भने, हामीलाई थाहा भएसम्म सम्पूर्ण जीवनको अन्त्यको कारण यही हुनेछ ।
कुनै वनस्पति नभएको
हाम्रो धरती सङ्कटमा छ
माटो: एक समग्र समाधान
पर्यावरणसँग सम्बन्धित लगभग सबैजसो प्रमुख सङ्कट, कुनै न कुनै रूपमा, माटो खराब हुँदै जानुको परिणाम वा लक्षण हो । त्यसैगरी, पर्यावरणसँग सम्बन्धित लगभग सबैजसो समस्यालाई माटोलाई स्वस्थ बनाएर सुल्झाउन सकिन्छ ।
हामीले पर्यावरणको सबै पक्षलाई सम्बोधन नगरी कुनै एउटा पक्षलाई मात्र सम्बोधन गर्न सक्छौँ भनेर सोच्नु भ्रम हो, किनभने पर्यावरणीय प्रणालीको कुनै पनि पक्ष अलग्गै काम गर्दैन । जीवन एउटा सिङ्गो प्रक्रिया हो, अनि जीवनका सबै पक्षहरू एकैसाथ भइरहेको छ भन्ने कुराप्रति हामी सचेत नुहँदासम्म कुनैपनि समाधान पूर्ण हुँदैन । थुप्रै तरिकाहरूले, माटो त्यो मञ्च हो जहाँबाट जीवन प्रस्फुरित हुन्छ । यदि हामीले माटोलाई ठीक गऱ्यौँ भने, हामीसँग सबै पक्षलाई ठीक गर्ने उत्तम अवसर रहन्छ ।
हाम्रो माटो जोगाऔँ?
माटोलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिका
भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन (इसरो)
प्रत्येक वर्ष, विश्ववभरि लगभग २४ अर्ब टन उर्वर माटो र २७,००० जैविक प्रजातिहरू नष्ट हुन्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रको रिपोर्ट : विश्वभरिको खेत विनाश हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ
ओह माटो !
फूलको सुगन्धको तुलनामा
मरो निम्ति अधिक कोमल छ